Tobim-piantsonana MAKI Arahi-maso akaiky ny fahasalaman’ireo mpandeha
Mihamafy hatrany ny fanaraha-maso ireo olona mivoaka sy miditra mampiasa ny lalam-pirenena fahenina sy fahefatra ary faharoa amin’izao fotoana izao.
Raiketina anaty solosaina avokoa mantsy ny mombamomba azy ireny ho an’ny tobim-piantsonana Maki eny Andohatapenaka ary alefa avy hatrany any amin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ny ATT izany. Izany no hatao dia hahafahana mitady avy hatrany ilay mpandeha raha mampiahiahy ny toe-pahasalamany, hiarovana ny manodidina. Ankoatra ireo tompon’andraikitra dia polisy 6 isan’andro no miambina sy manara-maso ity toerana ity izay tafiditra ao anatin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana ihany koa. Mahatratra 200 ka hatramin’ny 400 kosa ireo fiara miainga ao an-toerana isan’andro raha mahatratra 600 isa ny vanim-potoanan’ny fialantsasatra lehibe. Tsiahivina moa fa mahatratra 50 isa ireo kaoperativa mampihodina ity tobim-piantsonana iray ity mivondrona ao anatin’ny CPCTR. Nanatanteraka fambolen-kazo niraisana teny Imerintsiatosika izy ireo ny faran’ny herinandro teo.